आश्चर्यजनक घटना: डाक्टरले यी महिलाको आखाबाट निकाले १४ किरा! -
आश्चर्यजनक घटना: डाक्टरले यी महिलाको आखाबाट निकाले १४ किरा!
यकीन गर्न नसकिएला तर यो यथार्त हो कि अमेरिकामा डाक्टरहरुले एक महिलाको आखाबाट १४ किरा निकालेका छन् । मानवजातीको आखाबाट किरा निस्कनु यो पहिलोपटक भएको घटना हो । अमेरिकाको ओरेगांवमा बस्ने एब्बी बैक घोडसवारी र फिशिंगको शौखिन उनी जनावरहरुसँग नजिक रहने गर्छिन । जसको कारण उनी यस्तो बिरामी भएकी हुन् ।
एक दिन जब उनी घोडसवारीपछि आफ्नो घर फर्किन तब उनलाई आफ्नो आखामा केही समस्या भएको महसूस भएको थियो र आखा चिलाउन थालेको थियो । यस समयमा जब उनले आफ्नो आखा माडीरहेकी थिइन् तब उनको आखाबाट एक किरा निस्कियो । त्यसपछि उनी हत्तपत्त डाक्टरमा गईन्। जहाँ उनको आखाबाट १३ थप किराहरु निकालियो । अमेरिकी सेन्टर फर प्रिवेन्शन डीसीजको वैज्ञानिक अनुसार २६ वर्षीया एब्बी बैकलेको आखाबाट २० दिनमा कुल १४ किरा निकालियो जसको आकार १.२६ सेन्टीमीटर सम्मको थियो ।
जर्नल अफ ट्रपिकल मेडिसिन एण्ड हाइजीनले छापेको रिपोर्टअनुसार एब्बी बैकलेको आखामा यस्तो किराहरु पाईयो जुन अहिलेसम्म केवल कुकर, बिरालो र अन्य जनावरमा मात्र देखिएको थियो । कुनै मानवको आखाबाट यस प्रकारको किरा निकालिएको घटना यो पहिलो हो । यी किरा ‘थेलेजिया गुलोसा’ प्रजातिका हुन् । अमेरिकन जर्नलको रिसर्चले बताए कि यो भन्दा पहिले यस प्रजातिको किरा दक्षिणी क्यानडा र उत्तरी अमेरिकाको पशुहरुमा देखिएको थियो ।
Previous यी व्यक्ति जसले एक रातमा सबै गाउलेलाई करोडपति बनाए, यस्तो छ रहस्य !
Next अनमोल केसीलाई बाल कलाकार भन्ने बन्जाडे को हुन् ? अनमोलका लेडिज फ्यानले आक्रोश पोखे
यो भिडियो मात्र हेर्नु भयो भने तपाइको हासो रोक्न सक्न्नु हुदैन , बाफ्रे बाफ हसाउनलाई मानिसले के सम्म गरे ??भिडियो सहित हेर्नुहाेस हेर्नुहोस यो
यी व्यक्ति जसले एक रातमा सबै गाउलेलाई करोडपति बनाए, यस्तो छ रहस्य !
आज महाशिवरात्रि विशेष: १०० वर्ष पछि बनेको छ यस्तो अद्भुत संयोग